Nuucyada Maskaxda iyo Kobcintooda | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Noocyada maskaxda waxaan u kala saaraynaa 2 nooc oo kala ah maanka maskaxda iyo maskaxda miyirka. Bal indhaha si fiican
Aqoonta bani-aadamka waxaa lagu gartaa awoodda ay u leedahay horumarinta iyo cusboonaysiinta maskaxda. laakiin waxay u baahan tahay in laga caawiyo arrintan, waxaa ugu muhiimsan ee kobciyo maskaxda aadanaha waa akhrinta.
ula raac noocyadaan iyo sida ay u kala duwan yihiin:
1- Maanka maskaxda:
Maanku waa qayb ka mid ah maskaxda bini-aadamka oo awood u leh inay dadku dareemaan wax yaabaha noolashooda ku salaysan sida waqti, goobaha ay dagan yihiin. Sidoo kale waxay qaabilsan tahay in qofku wax qabto sida shaqooyinka jidhka 5-10%.
2- Maskaxda miyirka:
Miyirka waa qayb ka mid ah maskaxda bini-aadamka taasoo qaabilsan dabeecadaha gudaha maskaxda bini-aadamka. Waan qaybta maamsho 90-95% hawlaha jirka.
Miyirku wuxuu leeyahay shaqooyin badan, oo ay ka mid yihiin fekerka, falanqaynta macluumaada gaar ah sida fahamka iyo saadaalinta. sidoo kale waxay qaabilsan tahay keydinta macluumaadka
Sida xakamaynta dareenka aadanaha. Maskaxduna waa mas’uuliyadda koowaad ee hawlaha bani’aadamka, waxayn u baahan tahay in si wacan loo hor mariyo.
Aqoonta bani-aadamka waxaa lagu gartaa awoodda ay u leedahay horumarinta iyo cusboonaysiinta maskaxda. Laakiin waxay u baahan tahay in laga caawiyo arrintaan, waxaa ugu muhiimsan ee kobciyo maskaxda aadanaha waa akhrinta. Waana sababta aan wax uga qoray maskaxda iyo xasuusta. waayo buuggu waa dad cawiye oo fura dareenka akhriyaha. Waxuu awood u leeyahay in uu ku siiyo fikrado badan.
Tags: Nuucyada Maskaxda iyo Kobcintooda
Next post Si Aad u Xoojiso Maskaxdaada iyo Fikirkaaga Raac Tilmaamahaan Muhiimka ah
Previous post Caqliga iyo Maskaxda